Xiddiga Kooxda Man City ee David Silva oo looga gacan haatinayo Japan – Gool FM
Xiddiga Kooxda Man City ee David Silva oo looga gacan haatinayo Japan
Haaruun November 5, 2019
(Manchester) 05 Nof 2019. Kooxda kubadda cagta ee ka dhisan dalka Japan, Hokkaido Consadole Sapporo ayaa isku dayaysa inay Naadiga Manchester City kala soo saxiixato David Silva sida uu warinayo Warsidaha Sponichi.
Isagoo Wargeyskan uu soo xiganayo ilo ku dhow kooxdaas, waxay isku dayayaan inay la soo saxiixdaan kubbad sameeyahan Silva marka uu xilli ciyaareedkan dhammaado.
Kooxo ay ku jiraan Vissel Kobe iyo dhowr kooxood oo kale ayaa doonaya inay soo qaataan Silva, laakiin naadiga Sapporo ee dalka Japan ayaa ah kuwo aad u danaynaya inay la soo saxiixdaan isaga.
Sidoo kale David Silva ayaa la la xiriirinayay suuqii xagaaga kooxo ka dhisan horyaalka MLS-ka Mareykanka, waxaana kooxahaas ka mid ah Inter Miami, laakiin naadiga Sapporo ayaa haatan u jeesanaysa saxiixiisa, kaddib markii ay ku guuldarreysteen isku daygii ay ku doonayeen inay kula soo wareegaan Arjen Robben, taas oo aan dhicin, maadaama qoyskiisu ay ka soo horjeedeen tallaabadaas.
Bale, Sterling, Zaha, Werner, Mourinho iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu Saakay ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda